DAAWO: “Puntland lama tartamayso Soomaaliya, wey kagudubtay, Afrika ayay la tartamaysaa” – Puntlandtimes
May 18, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Agaasimaha Guud ee wasaaradda Waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax oo ka hadlayay maanta magaalada Garoowe, goobtii lagu daahfurayay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland ayaa sheegay in ay maamulkoodu ka gudbeen la tartanka Soomaaliya ee dhanak waxbarashada oo ay hiigsanayaan hadda Afrika.
Nin baa waxaa laga sheegay inuu yiri SAC nin maqlay oo naag xigatey waa yaab!
Haddaba erayada ah Puntland lama tartaneyso Soomaaliya, ee waxaay la tartaneysaa AFRICA!
Marka Soomaaliya waa Soomaaliya, Puntland waa waddan kale.
Arrimahaan ma ahan kuwo saacidaya dib u dhiska Soomaaliya iyo dib u soo celinta Dowladnimada iyo Qarannimada Soomaaliya.
Laakiin waa mid kala fogeyneysa isla markaana dib ku shideysa iney dadka wax magarada ah iyaguna waxaay doonaan sameeyaan.
Arrintaan ma ahan in la dhayalsado!
Dadka noocaas ah ma aheyn in ay xil hayaan waxay ahayd inuu goobaha qayilaada iska fadhiyo lkn waxay ku tusaysaa habdhaqan la caadeystey ee sondon 30 sano lagu soo jirey dibna aan looga laaban karin. Maxaan looga laaban karin? Maxaa yeela ninkaan wuxuu madax ka yahay bahda waxbarashada ilmihii larabay inay wada fiican raacaan ayuu ku barbaariyey wadadaas khadan marka soomaaliya mudo dheer ayey khaladkaas ku jireysaa hadaan gargaar alle imaan.
Si khalad ah ayaad u fahanteen erayada masuulku yiri..
Waa midoo masuulku waxuu ka hadlayey heerka waxbarasho ee ay wakhtigan xaadirka ah ay puntland marayso. Waa tan labaadoo masuulku waxuu iftiiminayey higsiga ay mustaqbalka rabto in ay puntland ka gaadho waxbarashada. Puntland gad-gadaal uma noqon kadho oo lama tartami kadho somslia inteeda kale oo waxbarasho ahaan aad uga hooseeya puntland. Sida kaliya ee puntland waxbarasho heer sare ah u gaari kadho waa in ay tartan la gasho dawladaha sida ingiriska iyo maraykan-ka. Taasu macnaheedu ma aha in puntland go’day.